Global Voices teny Malagasy » Taolana tapaka, ratra anaty: Mampiasa paikady ‘sahisahy, tsy manavaka’ ny polisin’i Hong Kong mandritra ny fihetsiketsehana, hoy ny Amnesty · Global Voices teny Malagasy » Print
Taolana tapaka, ratra anaty: Mampiasa paikady ‘sahisahy, tsy manavaka’ ny polisin'i Hong Kong mandritra ny fihetsiketsehana, hoy ny Amnesty
Voadika ny 03 Oktobra 2019 8:48 GMT 1	 · Mpanoratra Hong Kong Free Press Nandika Naomy
Dosien-tsary: polisy misahana ny rotaka HK/May James/HKFP.
Ny lahatsoratra etoana dia nosoratana sy navoakan'i  Jennifer Creery voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 20 Septambra 2019. Nivoaka indray ato amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tatitra vaovao avy amin'ny FTMF Amnesty International  no milaza fa mampiasa paikady sahisahy sy herisetram-balifaty  amin'ny famoretana ireo mpanao fihetsiketsehana mandritra ny asara ny polisin'i Hong Kong, ka miafara amin'ny ratra tahaka ny fahatapahan-taolana sy ratra anaty.
Ny tatitra — izay mifototra amin'ny antsafa miisa 38 tamin'ireo nosamborina, mpiasan'ny fitsaboana sy mpisolovava, ary fijerena indray ny sarimihetsika — no manome antsipirihany ny “kisary mahatohina” amin'ny fihetsika tsy mety ataon'ny polisy nandritra ny 15 herinandro nanaovana fihetsiketsehana tao an-tanàna, fihetsika izay lazain'ny Amnesty fa indraindray tonga hatramin'ny fampijaliana ara-batana. Niteny i Nicholas Bequelin, talen'ny Amnesty ao Azia Atsinanana:
Nalaina sy nalefa mivantana ho hitan'izao tontolo izao ny setriny mavesatra sy fifehezam-bahoaka ataon'ny polisin'i Hong KOng eny an'arabe. Tsy dia hita kokoa ny fihoaram-pefy maro dia maro ataon'ny polisy amin'ny mpanao fihetsiketsehana any amin'ny takona. Fa kely ny fisalasalana avelan'ny porofo, fa ao anatin'ny hetahetam-balifaty, fa miditra kisary mahatohina amin'ny paikady sahisahy sy tsy manara-dalàna hamelezana ny olona mandritra ny fihetsiketseham-panoherana ny hery mpitandro filaminan'i Hong Kong.
Ao amin'ny tatitra ataony ilay FTMF manonona ny fampiasana tafahoatra ny hery, daroka, fisamborana an-tondromolotra, fanivaivana ary fanemorana ny fahazoa-mitsabo sy torohevitra ho ohatra amin'ireo paikady ireo, ary manamarika ireo manamboninahitra sangany — fantatra amin'ny hoe “mpaka an-keriny” — ho tena mpanao izany fomba izany.
Mihoatra ny 1400 ny olona nosamborina tao Hong Kong nandritra ny asaram-piavaham-peo, nateraky ny volavolam-pampodiana-fandroahana izay mety ho nahafahana namindra olona ho any Shina isaky ny raharaha fa efa najanona. Niofo ho fampisehoan-kerisetra indraindray ny fihetsiketsehana manoloana ny fanitsakitsahan'i Beijing  sy ny filazana ho fitratrevatrevan'ny polisy , ankoatra ireo fandratrana hafa.
Sarintany mampiseho ireo fisamborana mifandraika amin'ny fihetsiketseham-panoherana noraketin'ny Amnesty International nanomboka volana jolay ka hatramin'ny Septambra 2019. Data nalaina avy amin'ny , HKGISK. Saripika: Amnesty International.
Niantsafa tamin'ny olona nosamborina miisa 21 ny Amnesty, ka ny 18 nampidirina hopitaly noho ny figidragidrana azy ireo, ary ny telo nandany dimy andro tany amin'ny hopitaly faharahakeliny.
‘Tsy afa-niaina aho’
Niteny tamin'ny Amnesty ny lehilahy iray fa, nidaroka azy ireo manamboninahitra ary nandrahona ny hanapaka ny tanany raha vao miezaka ny hiaro tena eo rehefa tsy nety namaly fanontaniana nandritra ny fisamborana azy tao amin'ny Zaratany Vaovao tamin'ny volana aogositra. Voatsonga tao amin'ny tatitra izy:
Tsapako hoe nidona tamin-javatra tena mafy ny tongotro. Avy eo niakatra teo amboniko ny manamboninahitra iray ary nanindry ny tratrako tamin'ny lohaliny. Tsapako ny hirifiry tamin'ny taolako ary tsy afa-niaina aho. Niezaka aho ny hihiaka fa tsy afa-niaina aho ary tsy afa-niteny.
Nampidirina hopitaly nandritra ny andro maromaro io lehilahy io taty aoriana fa nisy taolana tapaka sy ratra anaty. Nitatitra ihany koa izy fa nanery nanokatra ny masony ny manamboninahitra iray ary nandefa taratra laser tao, sady nilaza hoe, “Tsy tia manondrotondro ity amin'ny olona moa ianao?”
Nampiasaina tokoa ny lasers nandritra ny fihetsiketsehana hanorisorenana ireo manamboninahitra ary tamin'ny volana aogositra 2019, nisambotra mpianatra iray noho ny hoe fananana fitaovam-piadiana fanafihana ny polisy rehefa hita fa nitondra fanondroana laser miisa folo izy.
Lehilahy iray hafa, izay niaritra fahatapatapahana maromaro tamin'ny tanany nandritra ny fisamborana azy tamin'ny volana aogositra, no nilaza fa na dia teo aza ny fiangaviana hitondrana azy ho entina any amin'ny hopitaly dia tsy nekena ny hitsaboana azy nandritra ny adiny dimy raha mbola nohazonina.
Olona roa hafa noantsafaina indray nanoritsoritra ny fotoana namonkonana (gadrafohy) azy teny an'arabe sy noterena hifoka etona mandatsa-dranomaso nandritra ny fotoana maharitra.
Mitsipaka hatrany ireny fihetsika tsy mety ireny ny solontenan'ny polisy, milaza fa ny hery kely indrindra ilaina no ampiasain'ny manamboninahitra ary araka izay tena antonony no ataon-dry zareo mandritra ny fihetsiketseham-panoherana.
Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanora-gazety vao haingana, Tse Chun-chung, Lehiben'ny sampana Fifandraisana amin'ny vahoaka ao amin'ny polisy, no nilaza fa tsy ampy tokotanin-tsehatra ny tatitra nataon'ny Amnesty:
Ny tsy ampy dia tsy nanonona mazava momba ny tontolom-piarahamonina eto Hong Kong tao anatin'ny volana vitsivitsy ry zareo. Tsy maintsy manasongadina indray aho fa miatrika fanamby tsy mbola nisy toy izany hampanjaka ny lalàna.
Manana andraikitra ny polisy hampihatra tsy ankanavaka ny lalàna amin'ny toe-javatra tahaka izany. Noho io tontolom-piarahamonina io, dia maro ireo mpanao fihetsiketsehana hiringiriny sahisahy manitsaka ny lalàna, lasa mihasarotra ny mampihatra ny lalàna ho an'ny polisy.
Na izany aza, mialoha ny fivoahan'ny tatitra, nitatitra i Bequelin fa fanitsakitsahana mazava amin'ny lalànan'ny zon'olombelona iraisampirenena ireo fihoaram-pefy noraketin'ny Amnesty:
Averina indray, mampiasa herisetra ny polisy mialoha sy mandritra ny fisamborana, eny fa na dia efa tsy afa-mihetsika sy voatazona aza ilay olona. Hita tokoa fa tafahoatra ny fampiasan-kery, manitsakitsaka ny lalànan'ny zon'olombelona iraisampirenena.
Amin'ny fahabetsahan'ny fihoaram-pefy tsikaritray, dia miharihary fa tsy eo amin'ny toerana ahafahany manao famotorana intsony ka hanefitra amin'ny fiparitahan'ny famoretana tsy ara-dalàna atao amin'ny mpanao fihetsiketsehana ny polisin'i Hong Kong. Manao antso maika ny Amnesty International ny hanaovana famotorana mahaleotena sy tsy mitongilana natao hitondra mankany amin'ny fitsarana, mitady ny rariny ary manonitra, tsy itokisana loatra ireo rafitra anatiny efa misy toy ny Vaomiera Mahaleotenan'ny Polisy mandray fitarainana.
Nivoatra ho hetsika manohana ny demaokrasia manandrateny hitady ny mangarahara manoloana ny fanitsakitsahan'i Beijing ny hetsika manohitra ny fampodiana-fandroahana ao Hong Kong hatramin'ny jona 2019. Raha hamaky bebe kokoa momba ny hetsi-panoherana, miangavy tsidiho ny pejy manokana .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/03/143401/
 mampiasa paikady sahisahy sy herisetram-balifaty: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/hong-kong-arbitrary-arrests-brutal-beatings-and-torture-in-police-detention-revealed/
 fanitsakitsahan'i Beijing: https://www.hongkongfp.com/hong-kongs-july-1-democracy-rally/
 fitratrevatrevan'ny polisy: https://www.hongkongfp.com/2019/06/21/pictures-flow-like-water-hong-kong-protesters-converge-police-hq-day-wildcat-road-occupations/
 pejy manokana: https://globalvoices.org/specialcoverage/the-people-of-hong-kong-vs-the-china-extradition-bill/